को हुन् पारशसँग हिँड्ने नयाँ युवती ? खुल्यो रहस्य — Imandarmedia.com
को हुन् पारशसँग हिँड्ने नयाँ युवती ? खुल्यो रहस्य
काठमाडौ। पूर्वयुवराज पारश शाहको चक्कर नयाँ युवतीसँग चलेको खुलासा भएको छ। मध्यरातमा हार्ले डेभिडसन बाईकमा एक युवतिसँग पारश देखिएपछि खुलासा भएको हो। पारशको जस्तै कालो छालाको पाईन्ट र ज्याकेटमा देखिएकि ती युवति गायीका रहेको खुलासा भएको छ। काठमाडौँको ठमेलमा मास्क लगाएर पारशको बाईकमा देखिएकि ती युवति डिजे रहेको प्रतिक्रियाहरु आइरहेको छ।
सो भिडियोले अहिले सामाजिक संजाल भाइरल भएको छ।कुनै समय राजाका छोरा पारश अहिले सधैँजसो कालो कपडामा देखिन्छन्। सोहि कपडामा युवति पनि देखिएपछि सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताले खिसिट्युरी गरिरहेका छन्। ती युवतिको एक भिडियोले अहिले राम्रो स्थान पाइरहेको छ।
विष्णु माझीले गाएको ‘चरि जेलैमा’ बोलको गितमा ती युवतिले संगित दिएकि छिन्। काठमाडौँको एक क्लबमा ती युवति डिजेका रुपमा काम गर्ने गरेको भिडियोमा देख्न सकिन्छ । युवराज पारशको सधैँ चर्चा हुने गर्दछ । उनलाई मनपराउने जमात ठूलो छ। त्यसैले पनि होला केहि दिनअघि काठमाडौँमै हेल्मेट नलगाई हिँड्दा प्रहरीले रोकेपछि युवाहरुले प्रहरीबाट उनलाई छुटाएका थिए।
उक्त घटनाले पनि नेपाली संचारमाध्यममा राम्रै स्थान पाएको थियो। सोहि घटना भएको केहि समयपछि कमेडि च्याम्पियनमा भरतमणिले पारशको क्यारिकेचर गरेका थिए। पारशको क्यारिकेचरपछि भरतमणिलाई भोट गर्नेको संख्या ठूलो थियो। नभन्दै, पारशको क्यारीकेचर गरेपछि भरतमणिले उपाधि जितेका थिए।
युवतिसँग पारशको संगतः एक वर्षयता पारशको नाम धेरै युवतिहरुसँग जोडियो। सोनिका रोकायासँगको निकटताले त झनैँ मिडियामा चर्चा बटुलेको थियो। उनीहरु दुवैजना कहिले मुस्ताङ पुग्थे त कहिले हेलिकोप्टरमा शेयर गरेको भिडियोहरु सोनिकाले सार्वजनिक गर्थिन्।
जन्मदिनमा पारशले सोनिकालाई दिएको बहुमुल्य उपहरले पनि राम्रै चर्चा पाएको थियो। पारश सधैँ जसो कोहि न कोहि युवतिसँग निकट भएको समाचारहरु बाहिरिने गर्दछ। आखिर किन पारश श्रीमति हुदाहुदैँ अन्य युवतिसँग नजिक हुन रुचाउँछन् भन्ने प्रश्नहरु पनि आउने गर्दछ।
शुक्रबार युवराज्ञी हिमानी शाहको जन्मदिनमा बलिउडको चर्चित नायिका मनिषा कोइरालादेखि अन्य चर्चित व्यक्तित्वले हिमानीलाई जन्मदिनको शुभकामना दिए। तर, पारशले भने सामाजिक संजालमा हिमानीलाई जन्मदिनको शुभकामना दिएनन्। फेसबुकमा निकै सक्रिय देखिने पारशले हिमानीको जन्मदिनमा शुभकामना नदिएपछि धेरैले नराम्रो मानेका थिए।
सोनिकाको जन्मदिनमा बहुमुल्य उपहार दिने तर आफ्नै श्रीमतिको जन्मदिनमा मौन रहेको भन्दै नकारात्मक प्रतिक्रियाहरु पनि आएको थियो।यसै गरि,पूर्वयुवराज पारस शाह फेरी चर्चामा आएका छन्। उनको निजी निवास चोरी भएपछि उनी चर्चामा आएका हुन्।उनको पोखरास्थित निवासमा चोरी भएको हो। चोरीपछि प्रहरीले चोरमाथि एक्सन लिएको छ।
लेकासाइडस्थित बुलउँदीमा शाहले भाडामा लिएको घरबाट सामान चोरेको आरोपमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ। चोरी आरोपमा काठमाडौंको मित्रनगरबाट शिव गौतमलाई पक्राउ गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी रमेश बस्नेतले बताए। पक्राउ गरिएका गौतम शाहको निवासका कामदार हुन्।
शाहको निवासबाट क्यामरा, २ थान आइप्याड, २ थान दुरविन र नोकिया सेट चोरी भएको बताइएको छ। गौतमले पोखराबाट सामान चोरेर काठमाडौं ल्याएको खुलेको छ। काठमाडौं महानगरपालिका–२६ मित्रनगर स्थित न्यू राप्ती गेस्टहाउसबाट महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट खटिएको टोलीले उनलाई पक्रेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।चोरेको सामान गौतमले पूर्वयुवराजलाई फिर्ता गरेको एसपी बस्नेतले बताए।
यसै गरि, नेकपा माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीको २२ औं राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। सम्मेलनले पञ्चा सिंहको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ। सोमबारको बन्दसत्रमा विवादका कारण नाराबाजी भएपछि अध्यक्ष बाहेक अन्य कुनै पनि पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको घोषणा नगरी सम्पन्न गरिएको हो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अखिल क्रान्तिकारीको अध्यक्षमा पञ्चा सिंहलाई आइतबार नै तोकिदिएका थिए।
‘अध्यक्षमा पञ्चा सिंहबाहेक अरु कुनै पनि पदाधिकारी÷केन्द्रीय समिति बन्द सत्रको हलले टुंग्याउन सकेन,’ अखिल क्रान्तिकारीका नेता नरेश रेग्मीले भने, ‘सम्मेलन सम्पन्न भयो। सोमबारको बन्दसत्रमा पदाधिकारी, प्रदेश इञ्चार्ज र केन्द्रीय सदस्यहरु घोषणा गर्ने तयारी थियो। फ्याक्सन इन्चार्ज हितमान शाक्य, निवर्तमान अध्यक्ष रञ्जित तामाङसहितका नेताहरू आन्तरिक सहमतिबाट नामावली घोषणाको अन्तिम तयारी गरी बन्दसत्रको हलमा प्रवेश गरेका थिए।
तर त्यसअघि नै अखिल क्रान्तिकारीको महासचिव दीपेश पुन बनेको समाचार मिडियाहरुमा सार्वजनिक भइसकेको थियो। जबकि बन्दसत्रमा फ्याक्सन इन्चार्जले नामावली प्रस्तुत गर्ने र हलले पास गर्ने प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी नै थियो। महासचिवमा पुनको नाम सार्वजनिक भएलगत्तै महासचिवका दाबेदारहरु असन्तुष्ट थिए। महासचिवमा दीपेश पुनसँगै पवन कार्कीको पनि दाबी थियो।
दीपेशको नाम मिडियामा पहिल्यै सार्वजनिक भएपछि फ्याक्सन इञ्चार्ज शाक्यले हलमा पदाधिकारीहरुको नामावली वाचन गर्न नपाउँदै होहल्ला हुन थाल्यो। असन्तुष्ट पक्षले महासचिवमा दीपेशलाई स्वीकार्न नसकिने भन्दै नाराबाजी गर्न थाल्यो। स्थिति असामान्य भएपछि फ्याक्सन इन्चार्ज शाक्यले अध्यक्ष पञ्चा सिंहको नाम मात्र घोषणा गरेर सम्मेलन सकिएको घोषणा गरिदिए।
फ्याक्सन इञ्चार्ज शाक्य नै पार्टीको आधिकारिक व्यक्ति भएकाले अब उनैले अध्यक्ष बाहेकका बाँकी पद टुंगो लगाउने एक नेताले बताए। यद्यपि पुनले भने फ्याक्सन इञ्चार्ज शाक्यले महासचिवसहितका सबै पदाधिकारी टुंगो लगाइसकेको बताउँछन्। आफू वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमै रहन खोजेको हो।
तर महासचिवका दावेदारहरुबीच सहमति हुन नसकेपछि फ्याक्सन इञ्चार्ज शाक्यले आफूलाई महासचिव बनाएको पुनको भनाइ छ ।बन्दसत्रको हलमा विधानमा उल्लेख भएको भन्दा धेरै सदस्य राखेर समिति बनाउन खोजेपछि विरोध भएको उनले बताए । पुनले भने, ‘हलमा विधानभन्दा नबढाउने भन्ने आवाज उठेको हो। त्यो विषय मेरो पनि हो।
२०७४ सालमा भएको २१ औं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट केन्द्रीय समिति २४३ र पदाधिकारी ३३ सदस्यीय थियो । एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता भएपछि विद्यार्थी संगठनहरु पनि एकता प्रक्रियामा जाँदा अखिल क्रान्तिकारीको केन्द्रीय समिति १९९ सदस्यीय र पदाधिकारी २५ सदस्यीय बनाइएको थियो।